Fomba 9 hampiadana ny zavatra iray amin'ny fifandraisana izay mandeha haingana loatra - Fifandraisana
Rehefa manomboka mamony ny fifandraisana vaovao dia mety ho sarotra ny mitazona ny tongotrao amin'ny tany.
Rehefa mihaona amin'ny olona iray ianao ary manomboka mitifitra ireo hormonina, dia mety ho voan'ny fifankatiavana daholo ianao ary mihetsika haingana.
Avy eo, amin'ny fotoana tsy ampoizina, tsapanao tampoka fa lavitra ny lohanao ianao.
Ny zavatra isan-karazany dia mety hahatonga anao hahatsapa fa mandeha haingana ny zavatra tianao ...
Mety hoe nanao dingana lehibe ianao, toa fanaovana azy irery na ofisialy , fihaonana amin'ny ray aman-dreny na miara-mandroso .
Mety efa nanomboka niresaka momba ny ho avy ny namanao ary mampiditra anao ao anatin'ireny drafitra hipothetika ireny na dia herinandro na volana vitsivitsy monja aza no nifankahitanao.
Raha tratry ny tadion-drivotra ianao hatreto, fa izao mahatsapa ho tsy mahazo tanana intsony ny raharaha, dia mety manontany tena ianao hoe ahoana no ahafahanao miadana moramora zavatra nefa tsy manimba ny fiarahana.
Aoka tsy handeha mialoha ny tenantsika anefa isika.
Alohan'ny hidirantsika amin'ny fomba fametrahana ny freins amin'ny fifandraisana iray izay miala eo ambany fifehezana anao dia zava-dehibe ny hametrahanao ny rantsan-tananao amin'izay tena olana.
toerana aleha rehefa mankaleo ianao
Mila mamantatra ianao raha tena misy ny raharaha dia mihetsika haingana loatra ianao hiatrehana na raha mahatsapa ny fientanam-po voajanahary sy lolo ianao izay ampahany amin'ny ampahany amin'ny fifandraisana vaovao ary tsy fantatrao ny fomba hiatrehana azy ireo.
Mazava ho azy fa samy hafa ny olona sy ny fifandraisana rehetra, noho izany tsy misy fomba iray hitsinjovana zavatra rehetra, fa ireto fotsiny dia famantarana roa milaza fa ny fifandraisanareo dia tena mihetsika haingana loatra hahazoana fampiononana.
1. Manana fahatsapana mahatsikaiky lalina ianao.
Fantatsika rehetra izany fahatsapana izany. Rehefa miaraka amin'ilay olona ianao,, mandra-pahatongan'izany fotoana izany, dia nandrehitra ny tontolonao, ary nisy zavatra nolazain'izy ireo na nataon'izy ireo tampoka izay nanome anao fahatsapana hafahafa tao an-kibonao izay tsy afaka nihontsona ianao avy eo.
Ho an'ny sasany, midika izany fa, amin'ny ambaratonga lalina dia fantatrao fa tsy mety aminao ilay olona.
Mety ho izany no izy, fa angamba tsapanao ho lasa tsy voafehinao intsony ny raharaha.
Mety tsy ho diso ny fiarahana, mety tsy ho vonona ho amin'izany ianao. Nefa.
2. Tsy miresaka momba ny zavatra matotra ianao.
Raha mahazo aina ianao amin'ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana, dia tokony ho faly ianao miresaka olana 'lehibe' ary fantaro tsara ny toerana hijoroanao sy ny toerana hieritreretanao azy roa, amin'ny alàlan'ny hypothottique, handeha, fantatrao fa samy eo amin'ny pejy iray ihany ianao.
Raha tsy mahazo aina ianao, araka ny itiavanao mandany fotoana amin'ilay zava-kendrenao, dia hohalavirinao ny resaka mety ho matotra. Ny teny hoe ‘mila miresaka isika’ dia hitarika fahatahorana ao am-ponao.
3. Betsaka ny zavatra tsy fantatrao momba ny tsirairay.
Halako ny hamaky azy aminao, fa ny fitiavana aloha tsy eo fotsiny.
Raha toa miharatsy ny raharaha, nefa tsy afaka milaza tena mahalala ny olona ifaneraseranao ianao, na tsy nahalala azy ela akory ianao, mety ho marina ny fiheveranao fa tokony hisy ny zavatra nidina notch.
Ny fifandraisana dia mila omena fotoana sy toerana hivoatra voajanahary.
Tena mila izany ianao mifankahalala hahafahanao mamantatra raha mety ho lalao natao tany an-danitra ianao, nefa tsy nisy fanerena napetraka tamin'ny zavatra. Tsy misy afa-tsy amin'ny fotoana ihany.
Torohevitra hametrahana ny frein eo amin'ny fifandraisanareo mandositra
Raha misy marina amin'ireo voalaza etsy ambony ireo ho anao, dia eny, mety ho lasa somary tsy voafehy intsony ny fifandraisanareo.
Aza matahotra anefa. Tsy hoe satria mandeha haingana loatra ny raharaha dia tsy midika izany fa tsy mety izany. Ny fitiavana tsy mivoatra tampoka.
Betsaka ny fomba ahafahanao mampihena ny zavatra amin'ny hafainganam-pandehanao izay ahazoanao aina kokoa.
Matahotra ny olona sasany fa hirodana ny zava-drehetra raha manandrana manala zavatra izy ireo.
Fa raha natao ho ianao dia tsy hitondra fahavoazana ho an'ny fifandraisanao ny fakana zavatra haingana kokoa. Raha ny marina dia tokony hanao an'ity tontolo tsara iray ity.
zavatra mahafinaritra hatao rehefa mankaleo ao an-trano ianao
Raha mila miadana ianao, ity misy toro-hevitra vitsivitsy izay afaka manampy anao hampihena ny hafainganana fandehanan'ny lamasinina ifaneraseranao nefa tsy manafoana azy tanteraka.
1. Ny fahamarinana dia ny politika tsara indrindra
Ny zavatra voalohany aloha, mila mamoaka ny fihetseham-ponao imasom-bahoaka ianao.
Efa olon-dehibe ianao izao, ary maka fanahy toa mety hoe miraikitra amin'ny fasika fotsiny ny lohanao ary hialana amin'ny resaka mamitaka rehetra, dia tsy hahasoa izany.
Mila mazava amin'ny hafa ianao momba ny zavatra tsapanao.
Raha tianao ny zavatra hotohizana dia alao antoka fa hanome toky azy ireo izany, raha tsy izany dia mety hanomboka hieritreritra izy ireo fa io no fomba fialanao tsimoramora amin'ny fifandraisana tanteraka.
Tsy fantatrao mihitsy, mety ho mitovy amin'ny anao mihitsy ny fahatsapany anao, mety ho sempotra izy ireo rehefa miteny ianao fa te hampiadana kely ny zavatra.
Na dia ara-dalàna aza ny fisalasalana kely amin'ny olona iray raha ilazana izy ireo fa te hampiadana ny zava-drehetra (mieritreritra fa tsy nitovy ny fihetseham-pony), raha tena miahy anao izy ireo ary te hampandeha tsara ny raharaha dia tokony mifalia manaja ny fanapaha-kevitrao ary mampifanaraka.
2. Ataovy izay hahasosotra anao foana
Ny fifandraisana dia mazàna miditra an-tsokosoko ary mameno ny fotoana malalaka anananao.
Raha tsy manana drafitra napetraka na zavatra manokana hatao amin'ny hariva sy faran'ny herinandro ianao dia tsy manana antony mivaingana izany lazao hoe tsia mandany fotoana miaraka amin'ny vadinao.
Ny fandaniana fotoana miaraka amin'izy ireo dia mety ho lasa toerana misy anao.
Ny valiny eto dia ny mahita zavatra mameno ireo banga ireo ao amin'ny diarinao.
Makà toerana kely amin'ny fiarahanareo ary manaova zavatra mahafinaritra ho anao.
Makà fialam-boly vaovao tianao hoezahina hatrany, ary amporisiho ny mpiara-miasa aminao hanao toy izany koa. Ny fiainanao dia ho manankarena kokoa amin'izany ary ho salama kokoa ny fifandraisanao.
3. Atsaharo ny fanaovana tsinontsinona ny namanao
Heveriko fa tsy misy olona afaka milaza an-tsokosoko fa tsy mba nifandray am-po na oviana na oviana izy ireo ary namela ny fisakaizan'izy ireo hirodana.
Miezaha mafy mba hahazoana antoka fa ny namanao dia laharam-pahamehana indrindra toy ny taloha.
Na dia tsara ho an'ny olon-tianao sy ny olon-tianao aza ny mamatotra, dia alao antoka fa mandany fotoana mitokana miaraka amin'izy ireo koa ianao, toy ny talohan'ny nahatongavan'ny fitiavana anao sary.
4. Mandehana faran'ny herinandro
Na mandeha irery ianao na miaraka amin'ny namanao, mandosira any amin'ny toerana rehetra mandritra ny faran'ny herinandro raha tsy misy ny olon-tianao.
Zava-dehibe indrindra ny fandehanana mitokana raha toa ka mirona ao amin'ny valahana ianao. Ny toerana ara-tsaina sy ny fanaovana zavatra tsy miankina amin'ny tsirairay dia hanampy hampahatsiahy anao roa fa tsy tokony ho tanteraka ianao mpiara-miankina .
5. Mifantoha amin'izao fa tsy ny ho avy
Miezaha hisoroka ny firesahana momba ny zavatra azonareo roa atao miaraka amin'ny volana ambony na amin'ny taona ho avy. Amin'izao aloha dia mifantoha fotsiny amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao.
6. Ho tena Tenanao
Matetika, eo am-piandohan'ny fifandraisana, dia eo amin'ny fitondran-tena faran'izay tsara indrindra izahay isaky ny mahita ilay olona nampihetsiketsika ny fontsika.
inona no nitranga tamin'i shane mcmahon
Izahay dia mirary hanao fihetsika kely ary mampiseho ny lafiny tsara indrindra amin'ny tenantsika.
Miezaha hahatsapa tena ho marina sy milamina kokoa manodidina azy ireo mba hahitanao raha tena mifampiera na tsia ny tena tenanareo.
Aza avela ho voarebireby amin'ny baomba tsy manjombona ianao.
7. Alamino ny daty roa
Raha somary nahery vaika ny fotoana iarahanareo mianadahy dia tianareo hitazomana ny zavatra rehetra ho maivana sy mahafinaritra, dia eritrereto ny fandehananao daty roa miaraka amin'ny mpivady hafa izay nifanarahanareo tsara.
Amin'izany no ahafahanao mandany fotoana miaraka sy mankafy ny orinasan'ny tsirairay amin'ny tontolo tsy terena.
8. Manalavira ny fivoriana amin'ny fianakaviana
Na manao ahoana na manao ahoana ny filalaovanao azy, tsy misy ny fialana amin'ny zava-misy fa dingana lehibe ny fihaonana amin'ny ray aman-dreny.
Raha toa tsy mahazo tanana intsony ny raharaha, dia diniho ny fandefasana indray ny sakafo hariva nomaninao.
Raha manasa anao ho mpiray vodirindrina ho an'ny mariazy ny olon-tianao dia mifampiresaha amin'izy ireo raha toa ka azonao antoka fa vonona amin'ny zavatra toy izany ianareo roa.
famantarana fa te hiverina amiko ny sipako taloha
Aza mamorona fialan-tsiny hialana amin'ny adidin'ny fianakaviana, satria hiverina foana ny lainga hanenjika anao.
Ataovy mazava fotsiny fa tsy te hametraka an'izany tsindry izany eo amin'ny fifandraisanao ianao satria mbola tsy te hanimba zavatra eo aminao.
9. Aza lasa adala amin'ny fandefasana hafatra
Rehefa miditra amin'ny olona iray ianao, dia mety ho mora ny mandany tontolo andro mihidy amin'ny findainao fotsiny miandry ny hisehoan'ny anarany eo amin'ny efijeryo.
Tonga dia lasa fiankinan-doha sy fahazarana izany. Raha manahy momba ny zavatra mandeha haingana ianao dia diniho kely ny fametahana ny habetsaky ny lahatsoratra.
Raha mpisolo vava ahy amin'ny fahitsiana tanteraka amin'ny fifandraisana aho, ity no karazana faritany a lainga fotsy kely tsy afaka mandratra.
Aza milaza mivantana fa tsy te hiresaka amin'izy ireo firy, manandrama manonona ny fitiavanao fa manandrana mampihena ny fandefasanao hafatra mandritra ny asa ianao satria manandrana mampihena ny fotoana an-pikasanao ianao.
Na lazao azy ireo fa nanao fitsipika vaovao ianao fa tsy afaka mipaoka an-telefaona ianao rehefa mivoaka miaraka amin'ny fiezahana mba hanatrika eo bebe kokoa.
Ny tsy fananana fifandraisana tsy tapaka sy ny tsy fahafantarana ny fihetsiketsehana tsirairay dia midika fa hiresaka bebe kokoa ianao rehefa mifankahita ary manome toerana roa anao hifantoka amin'ny zavatra hafa fa tsy ny samy izy.
Mbola tsy azonao antoka ve izay hatao amin'ny fiarahana mandeha haingana loatra? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Fambara 10 milaza fa misy olan'ny fanoloran-tena
Fambara fampitandremana 17 Manimba ny fifandraisanareo ny fiheverana diso tafahoatra
ahoana no ahafantarana raha misy bandy mankafy anao any am-piasana
ny fomba handosirana ny olanao
fanontaniana lalina mahatonga anao hieritreritra
ahoana no ahalalanao fa tianao izy
tsy te ho lehibe korontana
tiako ianao fa tsy fantatrao